ယဲ - ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ယဲ (အၚ်္ဂလိက်: disease) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် အကာဲအရာ ဓမ္မတာဟွံသေင် မဖန်ဗဒှ်ကဵု လပါ်ပရေအ် ပ္ဍဲလဒက်ပတန် ခန္ဓကာယ နကဵုအလုံ ဟွံသေင်မ္ဂး မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ အဝဲလစှ်ေခန္ဓ၊ တုဲပၠန် ဒှ်အရာ မကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူ ပရိုက်ဘဲဒဏ်မ္ၚး မွဲတဲဓဝ် ဟွံသေင်ရ။ ယဲမ္ဂး ဗွဲမဂၠိုင် မတီလဝ် ဒဒှ် အကာဲအရာ မဒးလွဳ နကဵု ဂဥုဲတုဲ နွံကဵု လက်သန်ယဲ (symptom) ကေုာံ လက္ခဏာဂဥုဲ (Medical sign) ရ။ ယဲ ဂှ် ကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူ ဟိုတ်မ္ၚး မပ္တံကဵု ရောဂပစ္စယ (pathogen) ဟွံသေင်မ္ဂး အပ္ဍဲခန္ဓ ယောင်ယာရ။ ဥပမာ ဗွဲအပ္ဍဲ ယောင်ယာ သၞောတ်အိမ်မုန် (immune system) မ္ဂး ကတဵုဗဒှ်ကဵု ယဲနာနာသာ် မပ္တံကဵု immunodeficiency၊ hypersensitivity၊ allergy ကေုာံ autoimmune disorders တအ်ရ။
ပ္ဍဲကဵု ကောန်မၞိဟ် ယဲ ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် မဒှ်အကာဲအရာ မပ္တံကဵု ဂိ (pain)၊ မံင်စ ဒှ်ဗွဲဓမ္မတာဟွံသေင် (Abnormality behavior)၊ ဝေဒနာ (distress)၊ ပြသၞာပရေင်မၞိဟ် (social problems) ဟွံသေင်မ္ဂး သောက မကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူ ဒးဆောံလေင် မၞိဟ်မဆက်စပ်ကဵုဇကုတအ်ရ။ ယဝ်ရ သ္ဒးဟီုဗွဲတြးမ္ဂး လဆောဝ်မ္ဂး ပရိုက်ဘဲဒဏ် (injury)၊ ဟွံသၟဟ်ရထ (disability)၊ ကလဟ်လဖဟ် (disorder)၊ (syndrome)၊ (infection)၊ isolated symptom၊ deviant behavior ကေုာံ atypical variations of structure and function တအ်လေဝ် ဒှ်ယဲ ဖအိုတ်ကီုရ။ ယဲ ကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူခန္ဓကာယ သၟးဟွံသေင် ဟိုတ်နူကဵု စိုတ်လေဝ် ပကဵု ညံင်မၞိဟ်တအ် ဂွံပဒတဴ ဗွဲတသိုက် ဟွံမာန်ကီုရ။
ပွမချိုတ် နကဵုယဲဂှ် ညးကော်စ စုတိ ဟိုတ်နူအကာဲအရာသဘာဝ။ ယဲဂှ် ဗွဲသာမည နွံပန်ဂကူ - ယဲမကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူဒးစၟစၟောန် မပ္တံကဵု ဝဳရုသ် (infectious diseases)၊ ယဲ မကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူဍိုန်လျ (deficiency diseases)၊ ယဲမကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူဗဳဇ (hereditary diseases) (သီုကဵု genetic diseases ကဵု non-genetic hereditary diseases) ကေုာံ ယဲမကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူဇဳဝကမ္မ (physiological diseases)ရ။ ယဲဂှ် နကဵု နဲတၞဟ်လေဝ် ဗၟံက်ထ္ၜးမာန်ကီုရ။ ဥပမာ ယဲမကၠောအ်လေပ် ကဵု ယဲမကၠောအ်ဟွံလေပ်။ ယဲမချိုတ်မာန် ပ္ဍဲကောန်မၞိဟ်တအ်ဂှ် coronary artery disease (blood flow obstruction), followed by cerebrovascular disease ကေုာံ lower respiratory infections တအ်ရ။ ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်မောဝ်တုဲတအ်ဂှ် ယဲမကတဵုဒှ်စဂၠိုင်ဂှ် ယဲမကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူကတေင်အာရီု (neuropsychiatric conditions) မပ္တံကဵု စိုတ်ဖ္ဍိုက် (depression) ကေုာံ ဗျာပါရ (ဗဟေက်)(anxiety)တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုဂၠိုင်ရ။
ယၟုယဲ နကဵု ဘာသာမန်ဂမၠိုင်ပြင်ဆင်
ဂကူယဲနာနာ နူအဘိဓါန်မန်ဗၟာ နာဲသက်လောန်။ နာဲသုန်ဓန် ပကောံချူလဝ်။
ယဲကလောအ်ကလေန် (န) = ဖုရောင်နာ၊၊
ယဲကသံက်၊ ယဲတသံက် (န) = ပွေးရောဂါ၊၊
ယဲကသေန် (န) = ရေယုန်နာ၊၊
ယဲကသအ် (န) = အဆုတ်ရောဂါ၊၊
ယဲကာလ (န) = ကပ်ရောဂါ၊၊ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် တစ်ချိန်တည်းဖြစ်သောရောဂါ၊၊
ယဲကုဌ (န) = နူနာရောဂါ၊၊
ယဲကောန်ကၟအ်၊ ယဲကောန်တၟအ် (န) = နှလုံးရောဂါ၊၊
ယဲကအ် (န) = လည်ချောင်းရောဂါ၊၊ လည်ချောင်းနာရောဂါ၊၊
ယဲက္ဍိုပ်ဂိ (န) = ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊၊
ယဲကၞဲကြုတ်ထောင် (န) = အူအတက်ပေါက်ရောဂါ၊၊
ယဲကျာအာံဗာတ် (န) = လေထိုးနာ၊၊ လေအောင့်နာ၊၊
ယဲကၠင်ကၟတ် (န) = သည်းခြေရောဂါ၊၊
ယဲကၠန်၊ ယဲကၠန်စှ်ေ (န) = = အူကျရောဂါ၊၊
ယဲက္ၜင်ဇြိုက်၊ ယဲမုဟ်မွဲဂကူ) (န) = ဖွတ်စအိုနာ၊၊ (ပါဠိ - နာသိကရောဂ)
ယဲခန္ဓ (န) = (အမှောင့်ပယောဂ စသည်ကြောင့်မဟုတ်သော) သွေးရိုးသားရိုးရောဂါ၊၊
ယဲခဲါဒုတ် (န) = နူနာရောဂါ၊၊
ယဲခ္ဍက်၊ ယဲသ္ဍက် (န) = ချောင်းဆိုးရောဂါ၊၊
ယဲခ္ဍက်သြိုတ်၊ ယဲသ္ဍက်သြိုတ် (န) = မြစ်ခြောက်နာ၊၊ တီဘီရောဂါ၊၊
ယဲခၞော်၊ ယဲသၞော် (န) = အရေပြားယားယံရောဂါ၊၊
ယဲခၟင်ဂုဟ် (န) = ပါးချိတ်ရောင်နာ၊၊
ယဲခၟာဲလိင်ဂုဟ် (န) = မုတ်ရောင်ရောဂါ၊၊
ယဲဂကိတ် (န) = ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊၊
ယဲဂန္ဓမာလာ (န) = ကင်ဆာရောဂါ၊၊ (¦)
ယဲဂၞဴ (န) = ဝမ်းရောဂါ၊၊
ယဲဂၞဴအတိသာရ (န) = ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊၊
ယဲဂုဟ် (န) = ရောင်ရမ်းနာ၊၊
ယဲဂြိုဟ်၊ ယဲဂြိုဟ်ဂုဟ် (န) = အသည်းရောဂါ၊၊ အသည်းရောင်ရောဂါ၊၊
ယဲဂြိုဟ်ဇတဝ် (န) = နှလုံးတုန်ရောဂါ၊၊
ယဲၚိတ် (န) = ကုတ်ဟီးနာ၊၊ အသွေးအသားခန်းခြောက်စေတတ်သောအနာ၊၊ (ပါဠိ - သောသ)/
"ယဲၚိတ်ဂှ် ယဲမသကဟ်အာဖျုန်စၞာံမ္ဂးရ၊၊" (တြာဲဝိနယသင်ရိုဟ်ဂြဳ၊၊ စန္ဒိမာ၊၊)
ယဲၚာန် (န) = ငန်းရောဂါ၊၊
ယဲစရာင်ဒကှ် (န) = ထွတ်မြင်းနာ၊၊ အိုင်းအနာ၊၊ (ပါဠိ - ပဳဠက/ ပဳဠကာ)
ယဲစော် (န) = ဝဲရောဂါ၊၊ ကိုယ်အရေပြားရောဂါ၊၊
ယဲစၟအိက် (န) = ခူနာရောဂါ၊၊
ယဲစၠန်စလဳ (န) = အရေပြားရောဂါ၊၊ နူနာရောဂါတစ်မျိုး၊၊
ယဲစွက်ဂြိုဟ်၊ ယဲကၟက်ဂြိုဟ် (န) = ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊၊
ယဲဆီၜေတ် (န) = သွေးတိုးရောဂါ၊၊
ယဲဇတုက်ကၠိက်၊ ယဲခတုက်ကၠိက် (န) = ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊၊
ယဲဇတုက်စာင် (န) = လူကိုကူးစက်တတ်သော ကြက်ရောဂါ၊၊ ကြက်တုပ်ကွေးရောဂါ၊၊ (¦)
ယဲဇဳချာံ၊ ယဲပါဗဵု (န) = ယဥ်းနာ၊၊ (ကူးစက်တတ်သော အဖျားကြီးသည့် ရောဂါဆိုးတစ်မျိုး၊၊ (ပါဠိ - အဟိဝါတရောဂ)/ "ပဟိုတ်ကဵုကောန်တြုံညးမွဲ မဗၠး ယဲဇဳချာံဂှ်တုဲ ကစ္ဆပဇာတ် ကျာ်တြဲတွံ၊၊" (ဇ - ၁၇၈၊၊ အစွောံ၊၊) = "ဤကစ္ဆပဇာတ်ကို - တယောက်သော ယဥ်းအနာမှလွတ်သော အမျိုးသားကို အကြောင်းပြု၍ ဟောတော်မူ၏၊၊" (ညောင်ကန်)/ "ပ္ဍဲဍုင်သာရဝှ်ဂှ် ယဲပါဗဵုက္တဵုဒှ်ရ၊၊" (ဇ - ၁၇၈၊၊ အစွောံ၊၊) = "သာဝတ္ထိပြည်ဝယ် တဦးသောအမျိုး၌ ယဥ်းအနာသည် ဖြစ်သတတ်၊၊" (ညောင်ကန်)
ယဲဇဳဒသာ (န) = ကာလဝမ်းရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - မဟာဝိရေက)
ယဲဇိုင်စိင် (န) = ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊၊
ယဲဇိုင်တဍိုပ် (န) = ခြေထိုင်းသောအနာ၊၊ ခြေထောက်ကြီးသောအနာ၊၊ (ပါဠိ - သဳပဒ)
ယဲဇှ်ချာံ (န) = အအေးမိဖျားရောဂါ၊၊
ယဲဇွဟ်ချာံ (န) = တုပ်ကွေးရောဂါ၊၊
ယဲတုလာ၊ ယဲဒူလာ (ပါ/ပါသက်) (န) = အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲသော ယောကျာ်းရောဂါ၊၊ ဒူလာရောဂါ၊၊
ယဲတံင်ကိုတ် (န) = ကာလသားရောဂါ၊၊
ယဲတမြိုက်၊ ယဲတမြော် (န) = မုတ်ရောင်ရောဂါ၊၊ ကပ်ပယ်အိတ်ရောင်ရောဂါ၊၊
ယဲတၞီ၊ ယဲပၞီ (န) = ကိုယ်ရေပြားရောဂါ၊၊ နူနာရောဂါ၊၊
ယဲဒူလာသြဴ (န) = ဆီးရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - မဓုမေဟ)
ယဲပူဏံက် (န) = ဖက်ဖုနာ၊၊ အပူပိုင်းဇုန် ကူးစက်နာတစ်မျိုး၊၊
ယဲပူမှ် (န) = စိတ်သောက၊၊/ 'ပူမဟ်' တွင်ရှု၊၊
ယဲပုင် (န) = သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖျား၊၊ ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းမှ ကူးစက်တတ်သောဗိုင်းရပ်ရောဂါ၊၊
ယဲပဏ္ဍုရောဂ (န) = အသားအရေဖျော့တော့သောရောဂါ၊၊ အသားဝါရောဂါ၊၊
ယဲပ္ၚပ်ပ္ၚေင်ဂိ (န) = အဆစ်အမြစ်နာရောဂါ၊၊
ယဲပြင်ဏဳ (န) = နူနာရောဂါ၊၊
ယဲပၠိ (န) = ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သရက်ရွက်တွင်ဖြစ်သောရောဂါ၊၊
ယဲဖဍအ် (န) = ဖုရောင်နာ၊၊
ယဲဖဏှ်ေ၊ ယဲဖၞေဟ် (န) = ကျင်ငယ်လမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်သောရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - မုတ္တကိစ္ဆ)
ယဲဗြိင် (န) = ရေဖျဥ်းစသောဖျဥ်းရောဂါ၊၊
ယဲဘဂန်ဍိုရ် (န) = ဘဂန္ဒိုလ်နာ၊၊ ဝစ္စမဂ်ကို ဖောက်ခွဲတတ်သောအနာ၊၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - ဘဂန္ဒလ) (သက္ကတ - ဘဂန္ဒရ)
ယဲမကြိုက်အိုင် (န) = မုတ်ရောဂါ၊၊ ကပ်ပယ်အိတ်ရောင်နာ၊၊
ယဲမင်သရိုတ် (န) = လိပ်ခေါင်းသွေးကျရောဂါ၊၊ မြင်းသရိုက်နာ၊၊ (ပါဠိ - အရိသ/ ဒုန္နာမက) (စအိုဝ်တွင် သွေးကြောစူကြွ၍ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးယိုခြင်းစသည် ဖြစ်ပေါ်တတ်သောရောဂါ၊၊)
ယဲမတ်တၞအ် (န) = မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါ၊၊
ယဲမြန် (န) = ကျောက်ကြီးနာ၊၊ ကျောက်ရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - မသူရိကာ)
ယဲမှောတ်၊ ယဲသၟတ် (န) = ရင်ကျပ်ရောဂါ၊၊ ပန်းနာရောဂါ၊၊ (ပါဠိ - သာသ)
ယဲသညာ (န) = နှာခေါင်းရောဂါ၊၊ ထိပ်ကပ်နာရောဂါ၊၊
ယဲသလာ (န) = အရေပြားယားယံနာ၊၊ ပွေးညှင်းအနာ၊၊
ယဲသောထော (န) = ကုတ်ဟီးနာ၊၊ အသက်ရှူပြင်းသော ချောင်းဆိုနာတစ်မျိုး၊၊/ ညးမၞုံယဲသောထော = ကုတ်ဟီးနာရှိသောသူ၊၊ (ပါဠိ - သောသိက)
ယဲသအး၊ ယဲခအး (န) = ညှင်းအနာ၊၊ (အရေပြားယားနာ)
ယဲသန္နိပါတ် (န) = အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊၊
ယဲသမျာဍာတ်၊ ယဲပဿဴဍာတ် (န) = ဆီးချိုရောဂါ၊၊
ယဲသ္ၚိပၟတ် (န) = မီးယပ်ရောဂါ၊၊
ယဲၜိုင်သိုက် (န) = နာတာရှည်နှာခေါင်းရောဂါ၊၊
ယဲအိုင် (န) = မုတ်ကြီးရောဂါ၊၊ မုတ်ရောင်နာ၊၊
ယဲအာံမပံက်၊ ယဲပန္နရိုက် (န) = အစာမကြေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါတစ်မျိုး၊၊/ "ဇၟာပ်ပူဂဵုရ ကၠာဟွံဟာပ်ပုင် မပ္တံဗြာတ်၊ သတ်ဗြဴ၊ သတ်ဆု၊ ဍာ်တှ် လ္ပစညိ၊၊ ဟာပ်ပုင်တုဲ ဂပ်ဂဝ်သစရ၊၊ ကၠာဟွံဟာပ်ပုင်ယဝ်သစ ပၟတ်ဂၞဴပၠိုတ်အာ ယဲအာံမပံက်က္တဵုဒှ်ရ၊၊ ယဲပန္နရိုက်က္တဵုဒှ်ရမိဂ္ဂး၊၊" (သၠပတ်ဒ္ၚောဝ်သၜောံ)
ယဲဒိုက် (န) = အနာရောဂါ၊၊/ "ယာံရမဒးပြိုက်ပျဲပျာံညးတုန်လေဝ် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံ ဂၠိုင်ကဵုဝဳဝဲ ဂၠိုင်ကဵုယဲဒိုက်သန်၊၊" (ဇ - ၁၄၉၊၊ အစွောံ၊၊) = "သူတစ်ပါးတို့အား သတ်ဖြတ်ညှဥ်းဆဲသောသူသည် လောက၌ ရန်သူများ၏၊ အနာရောဂါများ၏၊၊"/ "မၞးတံမသက္ကုယဲဒိုက်ဒှ်ညိဟာ၊၊" (ဇ - ၄၃၆၊၊ အစွောံ၊၊) = "သင်တို့သည် အနာရောဂါကင်းပါကုန်၏လော၊၊ "/ (ကြိ) ဖျားနာသည်၊၊/ "ကာလဇကုမယဲဒိုက်မ္ဂး ညးမင်မွဲဝဳပရာဇကု ဒးနွံရောင်၊၊" = "မိမိဖျားနာသောအခါ မိမိကို စောင့်ရှောက်ပြုစုမည့်သူ ရှိရပါမည်၊၊"
ယဲဝေဒနာ (န) = ရောဂါဝေဒနာ၊၊/ "ယဲဝေဒနာမဇၞော်ဂှ် ဒှ်တဴရ၊၊" (ဇ - ၃၄၆၊၊ အစွောံ၊၊) = "ကြီးစွာသောရောဂါဝေဒနာဖြစ်၏၊၊"
ယဲသ၊ ယဲသြ (ကြိဝိ) အလွန်အမင်း၊၊ အလွန်တရာ၊၊/ ဂၠိုင်သန်ယဲသ = အရေအတွက် အလွန်များစွာ၊၊/ "ဂွံဗၠးနူဘဲ၊ မိပ်စိုတ်ယဲသြ၊၊" (လိက်ဟတ္ထိပါလ၊၊ အစွောံ၊၊) = "ဘေးမှလွတ်မြောက်၍ အလွန်ဝမ်းသာ၏၊၊"/ "ဍောင်ၜိုတ်ယဲသြ၊၊" (လိက်မိဒေဝကိန္နရဳ၊၊ နာဲသိုက်ဇု၊၊) = "အလွန်အမင်းပင်ပန်းသည်၊၊"
↑ ၁.၀ ၁.၁ ထာမ်ပလိက်:DorlandsDict
↑ White, Tim (19 December 2014). What is the Difference Between an 'Injury' and 'Disease' for Commonwealth Injury Claims?. Tindall Gask Bentley. Archived from the original on 27 October 2017။
↑ What is the deadliest disease in the world?. WHO (16 May 2012). Archived from the original on 17 December 2014။ Retrieved on7December 2014။
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ယဲ&oldid=16804"
၂၉ မာတ် ၂၀၂၀၊ ၁၄:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
မုက်လိက်ဏအ် လက္ကရဴအိုတ် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် ပ္ဍဲ ၂၉ မာတ် ၂၀၂၀ ပ္ဍဲ ၁၄:၃၄